Faritra Boeny : miroborobo ny seha-piahariana lojy | NewsMada
Faritra Boeny : miroborobo ny seha-piahariana lojy
Misokatra manomboka rahampitso 15 jona ny taom-piotazana lojy na Black eyes. Manodidina ny 1.500 hatramin’ny 1.700 Ar ny mety ho vidin’ny iray kilao miala any amin’ny mpamboly, amin’ity taom-pamokarana 2016 ity. Izay no tapaka teo anivon’ny Vovonam-paritry ny seha-pihariana lojy, ny 8 jona 2016 tao Mahajanga. Ao anatin’izany vovonam-paritra izany ireo mpisehatra rehetra isan’ambaratongany, mpamboly, mpanangom-bokatra, mpanondrana, mpamatsy zezika sy fanafody. Fiarovana ho azy ireo izany sy hifehezany ny seha-pihariana lojy any Boeny.
Manoloana ny firoboroboan’ity sehatra ity, maro amin’ireo mpamotsy vola maloto no mihazakazaka manadio ny volany amin’ny fandraharahana an-tsokosoko, indrindra amin’ny fanondranana ny vokatra. Raha ny vaovao avy any amin’ny faritra, sahin’ireo milaza ho mpandraharaha ireo ny mividy lafo, maherin’ny 2. 000 Ar ny kilao any am-potony.
“Ady atao amin’izany, ny fampanarahan-dalàna tsy azo ihodivirana manomboka izao ny fananana fahazoan-dalana mazava maha mpamboly, mpamatsy zezika sy fanafody, mpanangom-bokatra, mpitatitra, ary maha mpanondrana”, hoy ny lehiben’ny faritra Saïd Ahamad Jaffar. Tsy maintsy takina izany fahazoan-dalana izany any amin’ny lalam-pirenena. Tsy maintsy voamarin’ny zandary izany, raha tena manao ny asany marina izy ireo ; toy izany koa ny any amin’ny seranan-tsambo vao afaka aondrana ny vokatra, raha tena manao ny asany marina ny ao amin’ny fadintseranana.